If Clause နှင့် အကျုံးဝင်သော ပုံစံခွဲများကိုလေ့လာခြင်း (၂) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:02 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
(7) UNLESS : မပြုသော်/လျှင် ၊ မဖြစ်သော်/လျှင် . Unless is followed by an affirmative verb to express "if ... not" Unless ကို If.. not အစားသုံးနိုင်ပါတယ် ၊ Unless နောက်မှာ အငြင်းကြိယာမလိုက်ရပါဘူး ၊
not ရဲ့ သဘော အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ခြင်း un- ပါခြင်းတို့ကြောင့် အငြင်းအဓိပ္ပါယ်ပါပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ အငြင်းဓိပ္ပါယ်အတိုင်းပဲ ပြောချင်လျှင် Not
ထပ်ပေါင်းဖို့ မလိုပါဘူး ။
(7.1) I CAN'T stand up UNLESS you help me. ( = I can't stand up if you don't help me.)
(ကူညီလျှင် ရပ်နိုင်မယ် ..ဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ ၊ ဒီမှာ အငြင်းဝါကျပိုင်းနှစ်ခု can’t ..unless ထပ်ထားပြီး double negative ကနေ positive ကို ပြန်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ် ၊ Unless you help me, ဆိုတဲ့ clause တစ်ပိုင်းထဲဆိုလျှင် negative သဘောအတိုင်းပဲ ရှိပါတယ် ။ ဆိုချင်တာက Unless you DON’T help me, လို့ မရေးသင့်ဘူး ဆိုတာကို သတိပြုစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်) .
ဒုတိယ၀ါကျမှာ was ill ဖြစ်ကြောင်းပြနေပါတယ် ၊ be at work တည်ရှိကြောင်းပြနေပါတယ်.. .
(8.1) BUT FOR your help, I would have been in big trouble. ( =Without your help... / If you hadn't helped me...)
(9.1) IF (you are) IN DOUBT, consultadictionary. သံသယရှိလျှင် အဘိဓါန်နဲ့ ညှိနှိင်းပါ ( အဘိဓါန်မှာကြည့်ပြီး စစ်ဆေးပါ)
ပီတာက ဒီကို မကြာခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ၊ အဲလိုမဖြစ်လျှင် (ရောက်မလာလျှင်) ကျနော်တို့က သူမပါဘဲနဲ့ စတင်ရပါလိမ့်မယ် .
(11.3) Do you enjoy learning English in our group? IF YES, please tell us about your experience. IF NO, you can give some advice to us about what to do.
If yes, If no နေရာမှာ If so, If not တို့ကို သုံးလျှင်လည်း ရပါတယ် ၊ သို့သော် အပြန်အလှန်အားဖြင့် If so, If not နေရာမှာ If yes, If no တို့ကိုသုံးလို့မရပါဘူး ။ If so, If not တို့ဟာ ရှေ့က clause မှာဖေါ်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာအတိုင်းဖြစ်လျှင် ဆိုတဲ့သဘောကိုညွှန်းပြီး if yes, if no ကတော့ အဖြေ yes, no ကိုပဲ ပြန်ညွှန်းပြီး ပြောတာဖြစ်လို့ပါ ။
. (12-2) I'll buyasandwich IF I get hungry. ကျနော် ဆာလာလျှင် အသားညှပ်ပေါင်မုန့် ၀ယ်ပါမယ်